Wadada isku xirta Muqdisho & degmada Jowhar oo dib u dhis lagu bilaabay (Sawirro) | Baahin Media Warka Somalia iyo Somalida
WARARKA MAANTA Wadada isku xirta Muqdisho & degmada Jowhar oo dib u dhis lagu...
Wadada isku xirta Muqdisho & degmada Jowhar oo dib u dhis lagu bilaabay (Sawirro)
Dowlada Somalia oo bilowday mashruuc dib loogu dhisayo wadada isku xirta magaalada Muqdisho iyo degmada Jowhar ee gobolka Sh/dhexe.
Wadadan oo dhererkeedu gaarayo ku dhowaad 100-km ayaa dhaqaalaha ku baxaya waxaa ku deeqday dowlada dowlada Qatar, waana wejigii labaad ee mashruuc dib loogu dhisayo jidadka Muqdisho ku xira labada Shabelle.
Burbur xooggan ayaa ku dhacay wadadan, maadaama 30kii sano ee la soo dhaafay aysan helin wax dayactir ah, iyadoo gaadiidka ay dhibaato xoogan ku qabaan isticmaalkeeda.
Wejiga koowaad ee mashruuracan ayaa waxaa lagu dhisayaa wadada isku xirta Muqdisho iyo Afgooye oo dhowr bilood ka hor la bilaabay balse hadda u hakatay amni daro ka dib markii qaraxyo lagu dilay injineero u dhashay Turkiga oo wadadaas dhismaheeda ka qeyb qaadanayey, halka qaar kalena lagu dhaawacay.
Warar aan la xaqiijin ayaa sheegaya in dhismaha labada wado oo markii hore qandaraas lagu siiyey shirkad Turki ah haatan lagu wareejiyey shirkadda Buruuj Constraction Co oo ka mid ah shirkadaha dhismaha Soomaalida.
Guddoomiyaha Degmada Heliwaa Cabdixakiin Cumar Cabdulle ayaa kormeeray maanta Waddada oo ugu dambeyn la qorsheynayo in la saaro laami cusub oo isku xira gobollada Benaadir iyo Shabeellaha Dhexe.
Previous articleQarax Khasaaro geystay oo caawa ka dhacay Muqdisho & faahfaahino ka soo baxaya
Next articleMaxaad ka ogtahay dagaalka yaabka leh ee Sacuudiga iyo Iran ku dhex-maraya Yurub?
“Sababta ciidamada Uganda u ilaaliyaan Xarumaha QM ee Muqdisho waa hal arin oo Muhiim ah”
DAAWO Wararkii Ugu Dambeeyay Caalamka: Erdogan oo sheegay In lasoo weeraray Aadaanka Salaada, Go’aankii Germani & Cabsidii USA ee...
XOG: Safarka Axmed Madoobe Ee Imaaraat-ka Oo Shaki Badan Ku Abuuray Dawlada Dhexe
XOG DHAGEYSO: Villa Somaliya oo Heshay Dhaqaalihii ugu badnaa iyo walaaca Maamul Goboleedyada oo cirka galay
XOG Cusub: Guddoomiye Mursal Go’aan Culus qaatay kadib Go’doomintii lagu sameeyey
XOG:Yaa ku Cadaadinaya Madaxweyne Farmaajo inuu ka qeyb galo Caleemasaarka Deni?
XOG:Xagee ku Dambeeyay Mooshinkii laga gudbiyay Madaxweynaha Soomaaliya ee Farmaajo ?
Xil-ka-xayuubinta Donald Trump oo tallaabo weyn loo qaaday maanta
Goobtii ay ku burburtay dayuuradii Itoobiya oo loo bixiyey magac yaab leh